Mandray soa avy amin’ny sakafo ara-panahy daholo isika
Niresaka momba ny famantarana ny andro farany tamin’i Petera, Jakoba, Jaona, ary Andrea i Jesosy, taloha kelin’ny nahafatesany. Hoy izy avy eo: “Iza tokoa moa ilay mpanompo mendri-pitokisana sy malina izay notendren’ny tompony hikarakara an’ireo mpanompo ao an-tranony, ka hanome sakafo azy ireo amin’ny fotoana mety?” (Matio 24:3, 45; Marka 13:3, 4) Nanome toky an’ireo mpanara-dia azy i Jesosy fa hisy olona hasainy hanome sakafo ara-panahy azy ireo amin’ny andro farany. Izy mantsy ilay ‘tompon’izy ireo.’ Iza àry ilay mpanompo hasainy hanao izany?
Rahalahy vitsivitsy voahosotry ny fanahy io mpanompo io. Ny Filan-kevi-pitantanan’ny Vavolombelon’i Jehovah izy io, ary manome sakafo ara-panahy ho an’ny vahoakan’i Jehovah amin’ny fotoana ilana an’izany. Tsy mahazo sakafo ara-panahy àry isika raha tsy eo izy io.—Lioka 12:42.
Mikarakara ny fiangonan’Andriamanitra ny mpanompo mendri-pitokisana. (1 Timoty 3:15) Asain’i Jesosy miandraikitra ny fandaminan’i Jehovah etỳ an-tany io mpanompo io. Andraikitra lehibe izany satria mila mikarakara ny fananan’ny fandaminana izy io, mandamina ny asa fitoriana, ary mampianatra antsika amin’ny alalan’ny fiangonana. Manome sakafo ara-panahy antsika amin’ny alalan’ny boky, gazety, fivoriana, ary fivoriambe koa izy io. Tena ilaintsika amin’izao mihitsy izany.
Mendri-pitokisana io mpanompo io, satria mampianatra izay tena lazain’ny Baiboly ary mitory ny vaovao tsara. (Asan’ny Apostoly 10:42) Malina koa izy io, satria mitandrina tsara rehefa mikarakara ny fananan’i Kristy etỳ an-tany. Tahin’i Jehovah ny mpanompo mendri-pitokisana, ka mahavita manome sakafo ara-panahy be dia be. Lasa betsaka koa ny vahoakan’i Jehovah.—Isaia 60:22; 65:13.
Iza no nasain’i Jesosy hanome sakafo ara-panahy ny mpianany?
Nahoana no mendri-pitokisana sy malina io mpanompo io?
Hizara Hizara Iza ny Mpanompo Mendri-pitokisana sy Malina?
jl lesona 19